Showing २१-३० of ९५५ items.
राजनीतिक दल र समृद्ध नेपाल
सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक संस्कृतिले गाँजेको देशहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका स्तम्भ दलहरू तिनै संस्थाका नायकहरूका गलत महŒवकाङ्क्षाका शिकार बनेर दलीय अस्तित्वमात्र नभई देशको अस्मिता नै धरापमा परेको उदाहरण संसारमा देखिएका छन् । जबसम्म देशमा चोखो स्वप्नदर्शी नेतृत्व जन्मन सक्दैन, तबसम्म देशले कायाकल्प लिने कुरा खोक्रो कल्पना र नारा मात्र बन्छ । नेतृत्व भनेको काम हो, नाम र पदमात्र होइन ।कसैले नघच्घयाउँदै समस्या देख्न, जान्न, बोध गर्न र समाधान गर्न सक्ने तागत नै नेतृत्वको विशेषता हो । त्यसैले त नेतृत्व एक सफल निर्देशक, सुपरीवेक्षक र सङ्गठनको व्यवस्थापक हो भनिन्छ । विश्व नै एउटा गाउँजस्तो भइरहेको आजको
पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलिले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नु भयो । पार्टी र सरकारमा साथीहरुले काम गर्न दिएनन् र मध्यावधी निर्वाचन वाध्यतावस गर्नु परेको उहाँको भनाई छ । पार्टी, संसदीय दल र संसदमा छलफल गर्ने विकल्प लाई उहाँले प्रयोग गर्नु भएन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी घोषणा गर्ने विशेष अधिकार छैन । विकल्पहरुबाट पनि सरकार गठन नहुने भए मात्र मध्यावधी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । तर कुनै पनि विकल्प प्रयोग नगरि मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा र संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीबाट गरियो । राष्ट्रपतिले पनि केही दिन कानुनबिद् महान्याधिवक्तासँग सर सल
काँडाको बाटो ...
उनी भर्खर हिँड्न सिक्दै थिईन्। तोते बोलीमा भषिक लवज टिप्न थाल्दै थिईन्। रंगका नामहरु जान्दै थिईन्। बिस्तारै मानिसका अनुहारहरु ठम्याउन थालेकी थिइन्। दिन र रात, तातो र चिसो अनि नजिक र टाढा भेउ पाउँदै थिईन् उनी। तर, शैशव क्रीडालाभ पूरापुर अनुभव गर्न नपाउँदै आधा काख गुमाईन्। उनी दुई बर्षको हुँदा उनका बुवा को हत्या भयो।उनी यो धरतिमा आउँदा यहाँ वहने हावा स्वच्छ थिएन। त्यहाँ बारुदको गन्ध सघन थियो। कालो धुवाँका मुस्लोहरुले आकाश मैलिएको थियो। आफ्नो किल्ला जमाउनका निम्ति मान्छेहरु मारिंदै थिए, मार्दैथिए। आहत र चीत्कारमा चिथोरिएर कुरुप थियो परिस्थिति। सन् १९४५ मा रंगुनको यस्तै परिवेशको एउटा दिनमा आ
कोशी नदीको उत्पति र महत्व
शास्त्रीय प्रमाणका आधारमा परापूर्व कालमा यस गाधि नाम गरेका अत्यन्तै प्रतापी र धर्मात्मा राजा थिए । गाधि राजाकी एक सत्यवती नाम गरेकी कन्यारत्न राजकुमारीको जन्म भएको थियो । कन्या बढ्दै गइन । विवाहयोग्य भएपछि एकदिन पवित्र कर्मनिष्ठ सिद्ध ऋचिक नाम गरेका ऋषि गाधि राजाका घरमा आएर विवाहको प्रस्ताव राखे । अर्थात् कन्या मागे तर गाधिले यसो हेरेर आफ्नी छोरी दिन सुहाउने उत्तम र लायक ज्वाइँ ती ऋचिक नाम गरेका ऋषिलाई देखेनन् । त्यसैले राजाले ‘कसरी यो ऋषिलाई फर्काइदिऊँ’ भन्दै थिए । एउता उपायस्वरुप गाधिले भूमिका बनाएर भने, ‘हे मुनिवर हामी कुसित वंशका हौँ, हाम्री छोरी तपाईंलाई दिन अलिक अप्ठ्यारै छ ।
याक्थुङ लिम्बू समुदाय र मौलिक धर्म
प्राचीन याक्थुङ लाजे (लिम्बूवान) मा बसोबास गर्ने समुदायलाई याक्थुङ लिम्बू समुदाय भनिन्छ । यो समुदाय आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म संस्कृति भएको एक उन्नत समुदाय हो । यो समुदायकोे एक भिन्न प्रकारको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक बिशेषता रहेकोे छ । यसलाई याक्थुङ सभ्यता भनिन्छ । तर बर्तमानमा यो अवस्था छैन । आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई छोडेर अन्य जाति तथा समुदायको धर्म संस्कृति अंगाल्ने तथाकथित परम्परा हाबी भएको पाइन्छ । सभ्य र सुसंस्कृत समुदायको धर्म संस्कृति अनुकरण गर्दा आफु पनि सभ्य र सुसंस्कृत हुने मान्यताका कारण हाम्रो समुदायको मानिसहरू क्रमिक रूपले हिन्दुकरण हुन् पुगेको पाइन्छ । तर यसरी अन्य जाति तथा समुद
विकृति उन्मुख प्रेम दिवस
प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेलाई युवा पिँढीले मनोरञ्जनका रुपमा बुझिदिँदा ‘प्रेम दिवस’ मा विकृति भित्रिरहेको छ । प्रेम दिवसको अभ्युदय समर्पणमा आधारित भए पनि अहिले यस दिवसमा थुप्रै विकृति भित्रिएको अनुभूति युवादेखि बुढ्यौली पुस्ताको छ । युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने ४० वर्षीय राजेश राईले वास्तविक माया–प्रेमका लागि प्रेम दिवसको आवश्यकता नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘वास्तविक माया गर्ने सच्चाप्रेमीलाई सदैव माया गर्छ, जो स्वार्थसहितको माया गर्छ, उसलाई दिवस चाहिन्छ ।’ उनको बुझाइमा माया–प्रेम भावनामा हुन्छ । स्वार्थरहित मायामा प्रेमको गुण लुकेको हुन्छ । उनको पनि प्रेमविवाह हो । वास्
त्यो प्रेमपत्र !
पाँचथर... जीवनको लामो राजमार्गमा अबकृष्णभीर बनेर उभिएका छन्तिम्रा यादहरू।समकालीन समयका शक्तिशाली कवि चन्द्रवीर तुम्बापोको प्रेम कविता ‘इन्द्रेणी साँझको अवशान’ को अन्त्यतिरका अंश हुन्, माथिका हरफहरू । आफ्नै कविताको अन्तिम अंशले भनेजस्तै अब ‘वैंश’ र ‘प्रेमपत्र’ कवि चन्द्रवीरका यादहरूमा मात्र जीवित छन् । जीवन र जगत्लाई रङ्गवादी दर्शनशास्त्रको आँखाले हेर्न खोज्ने चन्द्रवीरले त्यतिबेला कविता लेख्न थालेकै थिएनन्, जतिबेला खुबै बान्की मिलाएर प्रेमपत्र लेख्थे । गाउँभरिका तन्नेरीहरूका प्रेमिकाहरूका लागि प्रेमपत्र लेखिदिने लेखन्दास थिए उसबेला चन्द्रवीर । त्यसरी प्रेमपत्र लेख्दालेख्दै कविता लेख्न थालेका च
‘संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला सर्वोच्चले गर्ला’
संसद् विघटनपछि देशमा सडक आन्दोलनहरू बढ्दै गइरहेका छन् । सत्तारुढ दलकै एउटा समूह सडकमा छ भने अर्को समूह सदनमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले चुनावको मिति तोकिसकेको अवस्था छ । चुनाव हुने नहुने अन्यौलता कायमै रहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसका सुनसरी सचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसन सुनसरीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका केदार भण्डारीसँग ब्लाष्ट दैनिकका धनबहादुर पुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशःसंसद् विघटन भयो पुनःस्थापना हुने सम्भावना देख्नुभएको छ ?–सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मात्र यसको टुङ्गो लाग्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभएको छ
अथक साधनाको उपजः लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज
दुई परिवारबीच सम्बन्ध गाँसिदै थियो । बौद्धिक व्यक्तित्व विष्णुदत्त आङ्बुहाङ (हालः क्यानडा) को सामाजिक व्यक्तित्व विष्णुकुमार यक्सोको ललितपुर भैंसेपाटीस्थित घरमा दलबलसहित आगमन भयो । यता यक्सो परिवार पनि तयारी अवस्थामा थियो । यक्सो परिवारको एउटा सदस्यका रूपमा भैंसेपाटीमा म पनि उपस्थित थिएँ ।त्यसपछि एउटा परम्परागत सांस्कृतिक वातावरणमा दुवै परिवारबीच एउटा सहमति भयो । सहमति थियो, विष्णुदत्त आङ्बुहाङको मागअनुसार उनको सुपुत्रलाई विष्णुकुमार यक्सोले आफ्नी सुपुत्री दिनुपर्ने । हिजो एउटै गाउँका गाउँले साथी विष्णुदत्त र विष्णुकुमार अब सम्धि–सम्धिमा परिणत हुँदै थिए । यसरी दुई परिवारबीच अनन्तसम्
लिम्बुवानका जल्दाबल्दा नन्दप्रसाद खेवा
धनकुटा नगरमा त्यतिखेर लिम्बूका घर केवल दुईवटा थिए । तत्कालीन धनकुटा बजार पञ्चायतको वडानम्बर १ (पछि धनकुटा नगरपञ्चायत हुँदै नगरपालिकाको वडानम्बर ४)को माथिल्लोटोल (भोटेचौतारा, हालः स्कुलडाँडा) मा हाम्रो घर थियो भने तल्लोटोल (देब्रेबास)मा नन्दप्रसाद खेवा लिम्बूको ।मेरा बुबाले दोस्रो विश्वयुद्ध लडी पेन्सन पकाई, नेपाली सेनाको सैन्य अधिकारीमा जागिर सुरु गरेपछि उनले तत्कालीन धनकुटा गौंडा नामले प्रख्यात प्रशासनिक क्षेत्र भएकै आसपासमा बसोबास सुरु गरे । लिम्बूहरूको सुवाङ्गी, राजनीति तथा विभिन्न मुद्दामामिलाका कारण धनकुटा गौंडा धाउनु परेको मात्रै होइन, भोजपुर दिप्साबाट धनकुटा आई बसोबास सुरु गरेका वृखबहाद